Radio Don Bosco - Maniry ho vangian'i Papa i Croatie
Maniry ho vangian'i Papa i Croatie
Nosoratan'i Ratovohery Rondro Mirambola
Lohahevitra : Zenit
Naseho ny : 7 febroary 2020
Namerina ny fanasana an’i Papa François hamangy an’i CROATIE ny lehiben’ny governemanta croate Andrej PLENKOVIC.
Isan’ny nivoitra tamin’ny fihaonany tamin’i Papa tao Vatican, omaly, izany. Fihaonana izay naharitra 20 minitra teo ho eo. Nitohy tamin’ny dinika niarahana tamin’i Kardinaly Pietro PAROLIN sy Monseigneur Richard GALLAGHER izany avy eo. Voaresaka tamin’izany ny momba ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin’i Vatican sy Croatie, ho an’ny tombotsoa iombonana. Noresahana ihany koa ny anjara andraikitr’i Croatie izay mitantana ny filankevitry ny vondrona eraopeana ato anatin’ny enim-bolana voalohany amin’ity taona ity. Tsiahivina fa efa nisy ny fihaonana voalohany teo amin’i Papa François sy ity praiminisitra croate ity tamin’ny volana oktobra.